प्रदेश खबर Archives - Page 215 of 216 - Paschimnepal.com
किन बढ्याे सल्यानी खुकुरीकाे माग ?
सल्यानी खुकुरीको माग दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ । देश, विदेशमा सल्यानको चिनोको रुपमा खुकुरी पठाउने र अन्य घरायसी कामको लागि प्रयोग गर्नेको संख्यामा बृद्धि भएपछि सल्यानी खुकुरीको माग बढेको हो । जिल्ला भित्र हुने बिभिन्न कार्यक्रममा सहभागी पाहुनाहरुलाई उपहार स्वरुप खुकुरी दिन थालेपछि सल्यानी खुकुरीको माग अझै बढेको छ । माग अनुसारको खुकुरी उत्पादन भने हुन सकेको छैन् । लामो समय देखी खुकुरी बना
बँदेल धपाउन सल्यान तीन गाविसका नागरिक रातभर जाग्राम बस्न थालेका छन् । जिल्लाको उत्तर–पश्चिम क्षेत्रमा पर्ने मुलखोला, देवस्थल र घाँजरीपिपलका केहि वडाहरुका नागरिक बँदेलले बारीमा लगाएको अन्नबाली खान थालेपछि रातभर जाग्राम बस्न बाध्य भएका हुन । वर्षे बालीमा नोक्सानी गरेको गर्न थालेपछि बँदेले धपाउन रातभरी नै जाग्राम बस्नु परेको स्थानीयको भनाई छ । विगत ३ वर्षदेखि लागातार मुलखोलाको वडा ४ र ५, देवस्थलको
पदाधिकारी नै चाहदैनन् स्ववियु निर्वाचन
पर्सि (भदौ ८ गते) हुने भनिएको मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको स्वतन्त्र विद्यार्थी यूनियन (स्ववियु) को मतदान मिति सारिएको छ । भदौ १३ गते सम्पन्न गर्ने भन्दै विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषद्ले निर्वाचनको मतदान मिति आईतबार दिउँसो सारेको हो । विप्लव माओवादी निकट अखिल (क्रान्तिकारी) विद्यार्थी संघगठनले विभिन्न माग राख्दै शनिबारदेखि निर्वाचन समितिको कार्यालयमा तालाबन्दी गरेपछि निर्वाचन सार्नु
दुर्घटनापछि सवारी चेकिङ्गमा कडाई
सरकारले आफुले निर्माण गरेको नियम कानुन नियमनमा खासै ध्यान नदिएको पाईन्छ । सडक दुर्घटना भए पछि मात्र प्रहरी तथा सरकारले विभिन्न खाले नियम लागु गर्ने गर्दछ । केहि समय अगाडी लागु गरेको टाईमकार्ड पनि अहिले सञ्चालनमा छैन । सिट क्षमता भन्दा बढि यात्रु नराख्ने नियम पनि अहिले प्रहरी तथा सरकारले कार्यान्वयनमा त्यति चासो दिएको पाईदैन । तर सडक दुर्घटना भएर हुने धनजनको क्षति पछि मात्र सरकारले यातायात सञ्चालन
जन्म दिने अामालाइ छाेराले गरे हत्या
जाजरकोटमा छोराले आफुलाई जन्मदिने आमाको हत्या गरेका छन । सल्ला गाविस १ लैकमका ३८ वर्षिय बृद्धिबहादुर खत्रीले ६५ वर्षीय आमा देउती खत्रीको हत्या गरेको प्रहरीले जनाएको छ । जग्गा सम्वन्धी विवाद भएपछि छोराले बन्चरो प्रहार गरी आमाको हत्या गरेको प्रहरीले बताएको छ । हत्या अभियोगमा पक्राउ परेका बुद्धिबहादुरले प्रारम्भिक अनुसन्धानको क्रममा प्रहरी समक्ष अपराध स्वीकार गरेका छन् । साउन २२ गते नै आमाको हत्
‘मृत्युमार्ग’काे दाग हटाउँदै कर्णाली राजमार्ग
तीन वर्षमा अाेरालाे लाग्दै सवारी दुर्घटना मृत्युमार्गले आफ्नो छवि बिगारेको कर्णाली राजमार्गमा पछिल्ला बर्ष सवारी दुर्घटनामा कमी आएको छ । हरेक वर्षझैं ठुला सवारी दुर्घटनामा थुप्रै नागरिकले अनाहकमा ज्यान गुमाउनु परेका समाचारले यो सडकमा यात्रा गर्ने यात्रु त्रसित बनेका थिए । पछिल्ला तीन वर्षको तथ्याङ्कलाई आधार मान्ने हो भने सवारी दुर्घटनामा विस्तारै कमि आएको छ । सुर्खेत–जुम्ला सडक खण्ड खुले
मलामी गएका रामबहादुर कसरी भए वेपत्ता ?
मलामी गएका एक व्यक्ति वेपत्ता भएका छन् । दैलेख कालभैरव – ४ का ६३ वर्षिय रामबहादुर भण्डारी नुहाउने क्रममा छामघाट खोलाबाट बगेर बेपत्ता शुक्रबार वेपत्ता भएका हुन् । मलामी गएका भण्डारी खोलामा नुहाउने क्रममा बगेर बेपत्ता भएकाे पुष्टि दैलख प्रहरीले गरेकाे छ । विहवार दिउँसो उनी नुहाउन खोलामा गएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दैलेखले जनाएको छ । उनको खोजतलास भैरहेको पनि प्रहरीले जनाएको छ ।
रोल्पाका पञ्च साउदीको जेलमा
रोजगारीको शिलशिलामा साउदी पुगेका रोल्पाका एक व्यक्ति साउदीको जेलमा परेका छन् । रोल्पा जिल्लाको थवाङ्ग–४ का पञ्च रोकामगर भारतीय नागरिकको हत्याको अरोपमा विगत ९ वर्षदेखि साउदीको जेलमा छन् । काठमाण्डौमा रहेको सन मेनपावरमार्फत साउदी अरब पुगेका थिए । कम्पनीको काम भनेर साउदी उडेका उनी मेनपावरले ठगेको साथीहरुसंग फोनमा जानकारी दिएका थिए । पञ्च साउदीमा मझरा (भेडा हेर्ने काम) गर्दै आएका थिए । तर पञ्च